निर्मलाको घरमा ‘भिआइपी’को भीड, कसले के-के आश्वासन दिए ? – Everest Dainik – News from Nepal
निर्मलाको घरमा ‘भिआइपी’को भीड, कसले के-के आश्वासन दिए ?
काठमाडौ, भदौ ११ । गत साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आइतबार एक महिना पुगेको छ ।
घटना भएको महिना दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्देश बोकेर सत्तारुढ दलका नेता एवं सांसद र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता एवं सांसदले आइतबार पन्त र प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका भीमदत्त नगरपालिका-१८ सालघारका सन्नी खुनाको घरमा पुगेका छन् ।
घटनाले उग्ररुप लिएपछि सत्तारुढ दलका नेता एवं सांसदले विषेश चाँसोका साथ पीडित परिवारसँग भेटघाट गरेका हुन् । यस्तै प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता एवं सांसदले घटनाको छानबिनका लागि भन्दै दुवै मृतकका परिवारसँग भेट गरेका थिए ।
सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवै कैलाली, ४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, नेकपाका सांसद एवं कञ्चनपुर, ३ बाट निर्वाचित डा। दिपक प्रकास भट्ट, कञ्चनपुर, २ बाट निर्वाचित नरबहादुर धामीका साथै प्रदेश सभाका सदस्यहरु पीडितका घरमा पुगेका थिए । पीडित परिवारलार्इ भेट्न नेकपाका नेता एवं ७ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकास शाहलगायत प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु पुगेका थिए ।
सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं सासद लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश लिएर आएको बताए । कञ्चनपुर, ३ का सांसद डा। दिपक प्रकास भट्टले निर्मलाको हत्यारा कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीले कडा निर्देशन दिएको बताउँदै सत्तारुढ दल र सरकार घटनाप्रति सम्वेदनशिल भएको बताए । अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
यस्तै कञ्चनपुर, २ का सांसद नरबहादुर धामीले पीडित परिवारलाई न्याय दिने विश्वास गरेका थिए । सत्तारुढ दलका सांसदले खुना परिवारसँग भेट गरी पीडित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै सरकारले सहिद घोषणा गरेको बताए ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता एव सांसदद्वय दिलेन्द्र प्रशाद बडू र वीरबहादुर बलायरले निर्मलाको परिवारसँग जसरी भए पनि न्यायका सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले घटना तोडमोड गरेको बताएका छन् । सरकारको कमजोरीले गोली चलेपछि खुना परिवार पीडामा परेको बताएका थिए । उनीहरुले दोषी उपर कारबाहीका लागि माग गर्ने आवश्वास दिए ।
ट्याग्स: ‘भिआइपी’, kanchanpur, lekhraj bhatta, NirmalaPant